The great Rara Travel
रारा यात्रा मनको यात्रा ।
देवघाटधामको पावन स्थलमा एक रात बस्न भनेर अप्राह्नन्नतिर काठमाडौबाट हिंडेको थिएँ । आपटारीमा ओर्लिँदा सुर्यले बिदा मागेर अँधेरीलाई निम्तो दिँदै थियो । त्यहाँको बिशेषता भन्नुपर्दा अपरिचितहरुलाई पनि ब्यक्तिगत गाडीहरुले देवघाट पुर्याइदिन्छन् । म पनि एउटा मोटरबाइकमा देवघाटधाम पुगेँ । गर्मी चढिसकेको रहेछ । त्यसमाथि बिजुलीको अबरोधले गर्दा पसिनाले सरिरलाइ सिन्चित गर्ने मौका पाएको थियो । एकाकीपन हटाउन फोनमा ब्यस्त भएँ म । एक हातमा हाते पंखा । अर्को हातमा मोबाइल । त्यति नै बेला दैलेखबाट बिकास दाइले राराको यात्राको लागि निम्तो भनेपस्चात सल्यान फर्किने भनेर हिंडेकोमा अर्को दिन दैलेख जाने निर्णय गरेँ । चितवनबाट नाइट सुर्खेतसम्मको टिकेट काटेर असहज यात्रा गरेँ । त्यस्ता अप्ठेरो गाडी नाइट सेवामा राख्नेलाई त कारबाही गर्नुपर्ने हो ! कसले पो हेर्ने हो ? असहज नै भएपनि दैलेखमा शनिबारको बिहानको १० बजेको खाना खाने समय भेट्न् सफल भएको थिएँ ।
दैलेख मेरो लागि प्रिय लागेको ठाउँ । २०७४ मङ्सिर १ गते पनि म दैलेखमा थिएँ । सौहार्दताको कत्ति कमी नभएको जिल्ला स्वास्थ्यको आवास गृह थियो। त्यतिखेर हामी पंचकोशीको श्रिस्थान नाभिस्थान र कोटिला दर्शन गरेका थियौँ । गोरोबर्णको अग्लो कदमा मिलेको जिउडाल भएका मुसुक्क हास्ने निरन्जन दाइसंगको यो दोश्रो भेट पनि प्रिय लाग्यो । उहाँका कान र गाला राताराता बेलाबेलामा भैरहने हुँदा दाइ सानैदेखि लजालु स्वभावको हुनुपर्छ जस्तो लाग्यो । निरन्जन दाइको स्वरमा मिठो मन छुने गीत सुन्न पाइने भएर त्यो आवास र आवास्बासीलाई कहिल्यै उराठ लाग्दैन होला । दुबै पटकको भेट प्रिय लाग्यो मलाई । भेट गराउने र दैलेख यात्राको श्रेय सबै बिकास दाइलाई जान्छ ।
आईतवारको दिन दैलेखको लाकन्द्रा पुगेर बस्ने प्लान बनेको थियो। दैलेख जिल्ला अस्पतालबाट हामी ४ जना हिंडेको थियौँ । निरन्जन दाइ अर्को दिन बिहान लकान्द्रा जाने कुरा भएको थियो। बाटोमा पर्ने दुलेश्वोर र पादुका नामका धार्मिक स्थल पनि भ्रमण गरी घाम डुब्न लाग्दा लकन्द्रा पुगियो । सोमबार र मंगलबार लकान्द्रा प्रा स्वा के मा एकिक्रित स्वास्थ्य सिबिरको आयोजना गरिएको थियो। । लकान्द्रा पिछडिएको क्षत्र र वास्तविक दुर्गाम रहेछ । प्रकृतिले पनि मन फुकाएर हरियाली नदिएर हेला गरेजस्तो प्रतीत भयो । सबै उजाड पहाड र कतै पनि रहर लाग्दो फांट नभएको । मन लगाएर सम्रिद्धिको गियर थिच्नु पर्ने महसुस हुन्छ ।
त्यो आयोजित सिबिर यथार्थ रुपमा सफल भएको थियो । सिबिरको उद्घाटनको समयमा गाउपालिका अध्यक्षको भबुकताले मेरो मन छोएको थियो । शायद डा बिकासजस्तो इमान्दार र लगनशिल ब्यक्तीको सहकार्य केही समयमा टुट्ने पीरले मुटुमा गाँठो पारेको थियो होला । त्यो गाँठो आश्रुले फुकेको थियो । शायद जिवनको एउटा आदर्श कमाइ त्यो हो । हुन पनि लकान्द्रा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रले आफ्नो निर्माण भएको २३ बर्षपछि बल्ल डाक्टर देख्ने सौभाग्य प्राप्त गरेको थियो । दुई बर्षमा डा. बिकासले धेरै गुन लगाएको कुराको मुक्तकन्ठले प्रसम्शा गर्दै थिए अध्यक्षले । जे होस् केही कुराको महत्व पैसाभन्दा माथि हुन्छ । जुन किनेर पाइँदैन । त्यो अश्रुको मूल्य तोक्ने कुनै यन्त्र र बिधी छैन होला । त्यो भाबुक बातावरणलाई निरन्जन दाइले अध्यक्ष र डा बिकासको कामको प्रसम्शा गर्दिएर अझै मलजल गर्नुभएको थियो ।
स्वास्थ्य सिबिरमा बिरामीको घुइँचोले म झ्यालबाट उम्किन परेको थियो । त्यँही बसे त श्वास फेर्न मुस्किल हुने ! झ्यालबाट उम्किएर भागेको देख्नेहरु मुसुमुसु हाँस्दै थिए । पछी त बिरामी पनि उछिनपाछिन गर्दै झ्यालबाट छिर्ने जुक्ती निकालेका थिए । सदाको जस्तै महिलाको संख्या बढी थियो । सबैका एकै किसिमका समस्या । जिउ दुख्ने ,कट्कटी खाने ,सिल्का हान्ने .निद्रा नलाग्ने आदि । ति समस्याहरु मानसिक भन्दा पनि सामाजिक समस्याको शारिरिक प्रस्फुटन हुन् भन्ने लाग्छ । चिरफार त सामजको गर्नुपर्ने हो । सरकारले औषधी निशुल्क गर्दैमा ठोस परिणाम आउला र ? टाउको दुखाइमा नाइटोको उपचार जस्तै हो । ति त्यस्ता समस्या हुन् ,जुन घातक त हुँदैनन् । तर मनको भित्री तहसम्म जरो गाडेका हुन्छन् । सबैलाई भिडियो गरे आधा रोग सन्चो हुने । निरन्जन दाइ र बिकास दाइलाई भिडियो गर्दा हम्मे हम्मेभएको हुनुपर्छ । शायद भिदिओ एक्स रे गर्ने कोठामा उम्किन झ्याल थिएन होला !
स्वास्थ्यसिबिर सकेको अर्को बिहानीमा रारातर्फको यात्रा सुरु भयो । लकान्द्राबाट ७ जनाको टिम प्रस्थान गर्‍यो । चितवनबाट २ जना र सुर्खेत बाट १ जना दन्त चिकित्सक साथीहरु अघिल्लो राती अाइपुगेका थिए । ति डेन्टल डाक्टरहरु दैलेख अस्पतालमा काम गर्ने डेन्टल डाक्टरको साथी थिए । चिनजान नभएकोले बोल्न त गर्हो हुने भयो । तिनिहरुको शान्ती देखेर अफुलाई भने पट्यार लाग्दै थियो । मेरा एक जना साथी सबैभन्दा अगाडिको सिटमा बस्नुभएको थियो । भने डा बिकास र म पछाडिको सिटमा बसेका थियौँ । पछाडिको सिटको झ्यालतिर कोही माहान् ब्यक्ती बसेको हुनुपर्छ । रङिन पान हो कि मेगाश्री चपाएर थुकसँग लेस्सिएको उत्पादित पदार्थले झ्याल रङिएको थियो । यसो बिचार गर्दा नेपालमा हात धुन सिकाएजस्तै थुक्न पनि सिकाउने कार्यक्रमको खाँचो जस्तो लाग्यो ।
गाडीको गुरु पनि अजिबका थिए । होचो कदका कृष्ण बर्णको मुसुक्क हाँस्दा मेगाश्रीले रङिएका दाँत देखिने गुरुले बेलामौकामा मेगाश्रीको aerosol हावामा छोड्ने गर्थे । त्यसको गन्धले हाम्रो नाकलाई धेरै पटक सतायो । गुरुलाई जिस्काउन पनि रमाइलो नै भयो । बिचको सिटको झ्यालतिर बस्ने र मलाई बिशेष गरी सताएको थियो । ति गुरु गाडी पहिलोपटक चलाएजस्तो व्यबहार गर्थे । मुगूको लागि पर्मिट नलगेको भएर १५०० जरिवाना तिर्नुपरेको थियो। त्राफिक पूलिसले कुनै हालतमा छोडेन । यस्तै एक ठाउमा एन्ट्री गर्न पर्नेमा नगरी हुइक्याउने भएर मस्त गाली खाए तिनले । त्यस्पछि त हामी नै रोक्न लगौथ्यौँ प्रहरी चेक्पोस्ट्मा । सुस्त गुरु नचाहिने ठाउँमा फास्ट हुन्थे ।
बिचको सिट महिला कोटा जस्तै नै भयो । बिचको सिट अपरिचयको पर्खालजस्तो महसुस भयो । म प्रयास गर्दै थिएँ त्यो पर्खाल भत्काउन । तीन जना डेन्टलका डाक्टरहरु बसेका थिए बिचको सिटमा चानुमानु लागेर । मेरो अगाडि बस्ने को नाम तमन्ना रहिछ । हेर्दा खाइलाग्दो जिउडाल ,फिजारिएको कपाल ,रातो टिसर्ट ,कालो जिन्स र खैरो चप्पल लगाएकी थिन् । उनलाई र मलाई मेगाश्रीको दुर्गन्धको कृपा परेको थियो बारम्बार । अर्को छेउको झ्यालतिर अस्मिता बसेकी थिन् । होचो कदकी ,मुस्कुराउँदा अगाडिका दुइटा माथिल्ला सेता दाँत टल्किने, सिधा पारीएको कपालले कुमलाई सुम्सुम्याइरहने ,पिन्क कलरको टिसर्ट, कालो जिन्स र टाटेपाटे स्पोर्टस जुत्ता लगाएकी अस्मिताको नाकको डाँडिमा पावरवाला चस्मा चिप्लिरहन्थ्यो । बिचमा बसेकी कन्चना भने हेर्दा शान्त देखिने चन्चल चुलबुले जस्ती थिन् । बाटुलो अनुहार भएकी कन्चना निलो सेतो टिसर्ट र कालो जिन्समा थिन् । यि त थिए पहिलो दिनका हुलिया । ब्यागको आकार हेर्दा केही घण्टामा परिवर्तन गर्न सकिने बन्दोबस्त थियो भन्ने अनुमान लगाउन सकिन्थ्यो । पछील्लो सिटको अर्को छेउमा आसिन मनिषासँग पहिले नै चिनजान भएकोले धेरै याद गरिन मैले । उनको अनुहारमा कान्तीको अध्ययन गर्दा लामो समयदेखिको निद्रासङको संघर्ष झल्किन्थ्यो । उनको मनभित्र गहिरो अशान्तिको ठम्याइ थियो मेरो ।
दैलेखको राकाम भन्ने ठाउँमा चिया खान रोकिएका थियौँ । यात्रााको हाम्रो पहिलो स्टेशन थियो राकाम । बिस्तारै फुक्दै थियो चिनाजानी हामिबीच । कर्णाली राजामार्ग हुँदै कालिकोटको मान्मा नपुग्दै खाना खाने समय भएको पेटले खबरदारी गर्दै थियो । त्यहाँ ११ बजेको आसपासमा सनराइज होटेलमा खाना खाएपछी हामी प्रस्थान गर्यौँ । बेलुका ४ बजे तिर नाङ्म भन्ने ठाउमा पुग्यौँ । चिया त मेरो लागि अम्म्ल जस्तै हो। त्यसैले चिया खाने ठाउँ खोज्दा झिङाको घनत्व कालिकोट मान्मा भन्दा पनि बढी देखियो । निधार खुम्चिएपनी ,नाक चेप्रिएपनि चिया त खाइयो । शायद झिङाको एकाधिकार राज्य होला त्यो ठाउँ भन्ने लागेर ! पूरै रारा यात्रामागतिलो चिया उही दैलेख फर्किएपछी मात्र जुर्यो ।
त्यस्पछी हामी ताल्चा सम्म पुग्ने उद्देस्यले हिड्यौँ । बाटोको जोखिमका कारण बेलुका ६ बजेपस्चात हिंड्न नपाइने रहेछ । प्रहरिले गोठिज्युला भन्ने ठाउँमा रोक्यो र कागज गरेर मात्र ताल्चाको लागि अनुमती दियो । पहिले नै भयको बिउ मनमा आर्मिले कागज गरेर रोपेको थियो । त्यसैले होला बजिरहेको गीत पनि बन्द गरेर एक टक बाटोतिर ध्यान थियो सबैको । शायद भगवानलाई सम्म्झिँदै थिए होला । म त सम्झिने भन्दा पनि बानि नै छ “ हरी ॐ “ भन्दै उच्चारण गर्ने बेलाबेलामा । कसैलाई भने मनोरन्जनको बिषय भएछ ! हरी ॐ को ठाउँमा अपसब्द बोल्ने बानी भएको ब्यक्तिको उपस्थिती भएको भए राम्रो मान्थे होला शायद !
रातिको १० बजे ताल्चा पुगियो । होटेलको आङनमा आगो बालेर आगो ताप्ने र खाना खाने काम भयो । बाटोको खाल्डाखुल्डीले सरिरका सबै भागहरु हल्ल्लाउने भएर पुरै जिउ थाकेको थियो । मुगुमा रातो चामलको भात पहिलोपटक खायौँ । जिब्रोले भने त्यती रुचाएन । यात्रााको थकानले सबैको जाँगर मरिसकेकोले खानपिन गरेर सुत्न गयौँ । केटा र केटीको कोठा अलग भएपनि द्रिस्यलाई मात्रा अलग गर्ने खालको थियो। ध्वनी अलग भने हुन सकेन। बिहानै बजाएको शुभ मन्त्रले उनिहरुको निद्रा नै खुलेछ ।
बिहानिपख कोदाको रोटी खाएर रारा तालतिर लागियो । रारा राष्ट्रिय निकुन्ज प्रबेश गर्दा ५०० प्रबेश शुल्क लाग्ने रहेछ । प्रबेश गरेपछि गाडीले रारा ताल नपुग्दै एउटा चौरसम्म लगेर छोड्न सक्ने रहेछ । सुरु त फोटो खिच्न राकाम बाटै भएको थियो । तमन्नाले त डाँडा देखेपनि बाख्रा देखेपनि फोटो क्लिक गरिहल्थिन् । मोबाइलको मेमरी पुरै खाली गरेर आएको हुनुपर्छ भन्ने अनुमान थियो मेरो । अब त बाटोको हरेक ठाउँमा रोकी रोकी फोटो सेसन सुरु भयो । मलाई नि त्यो फोटो सेसन देखेरै जाङर पलायो। आफूले पनि अली अली खिचियो । केटीहरुलाई भने जित्न आजसम्म कहिल्यै सकिएन । पोज दिने एउटा क्लास नै लिनुपर्ला जस्तो हुन्छ ! जे जस्तो भएपनि हाम्रा सहयात्रि मैले पहिले संगत गरेका केटी सहयात्रिहरु भन्दा शान्त मान्नुपर्छ । शायद झिम्मिनसकेकोले होला । र फोटो खिच्ने कलामा १० पूर्णन्कमा ८ दिन सकिन्थ्यो ।
केही बेर हिंडेपछि नेपालको सबैभन्दा ठुलो ताल राराको फराकिलो आयातनको द्रिस्य देखियो । एक नयनभरीमा नअटाउने बिशाल शान्त थिइन् रारा । निलो पानी थियो । पारीका डाँडाहरु एकटकले रारालाई हेरेर मन्त्रमुग्ध भएजस्तो प्रतित हुन्थ्यो । बादलहरु पनि एक छिन स्वर्गकी अप्सरा हेर्न अडिएजस्तो भान हुन्थ्यो। दुई पहाडका चुचुराका बिचमा लुकेर चियाउन खोज्दै थिए बादलहरु। कोही बदमास बादलहरु त लाज नमानी सिधै माथिबाटै हेर्दै थिए । सुर्यदेब भने सन्कोच मानेर होला कतै देखिएका थिएनन् । फोटा सेसन हुँदै थिए । मलाई भने सुर्यले दर्शन नदेलान् भन्ने पिर परेको थियो ।
हामी रारा छेउ पुग्दा डुंगाको लागि ढिला भाईसकेको रहेछ । डुंगा नपाउने देखेसी रारा किनारको बाटो हिंड्न् लाग्यौँ हामी यदु दाइ र म। अरु पनि अाउलान् भनेको त मस्त फोटो सेस्सन चलिरहेको रहेछ । बिकास दाइ पूरै ठुस्केर बसेका थिए बोटिङ गर्ने रहर नहुने,ंअहुने,ँअहुने देखेर । तर कसरी हो एक जना निकुन्जको कर्मचारी सँगको बार्तालापले डुंगाको ब्यबस्था भएछ । अनि हिडिरहेका हामी फर्कियौँ । डुंगा चडेर अर्को किनारको होटेलमा खाना खानु पर्ने थियो । डुंगा चडेपछि राराको बीचमा पुग्दा सुर्यको किरणले रारालाई प्राकाशित गर्‍यो । राराको रङ हरियो ,निलो , र सुन्तला रङ्को बिबिध मिश्रनको अद्भुत द्रिस्य देख्न सकिन्थ्यो । लाग्थ्यो राराले आफ्नो रुप फेर्दै छिन् । देवताहरु आकाशबाट नियाल्दै होलान् । राराको मनमोहक द्रिश्यले अद्भुत शक्तिको संचार गरेको थियो सबैमा ।
फर्किने बेला घोडा चडेर फर्किने भनेको त घोडावालाले धोका दिएर हामी पूरै हिंड्नुपरेको थियो। हिंड्ने बेला अस्मिता र तमन्नलाई गार्हो भएको बुझ्न सकिन्थ्यो । यदु दाइ र म भने रमाइरहेका थियौँ रारालाई आधा फेरो मार्न पाएकोमा । मनमनी बेस्मरी गाली गरे होलान् उनिहरुले शायद । त्यसैले घोडाको बन्दोबस्त गर्न हरसम्भव प्रयास गर्दै थियौँ । तर गाडी आउने ठाउँसम्म पुग्दा पनि ब्यबस्था गर्न सकिएन । अब त कुनै बेला हाम्रो उपस्थिती हुने यात्रा कथंकदाचित भएछ भने पनि ठाडै अस्विकार गर्नेछन् भनेर अनुमान गर्यौँ । मेरो बाहेक सबैका पहिरन फरक भइसकेका थिए । म त झिनोमसिनो तयारी पनि नगरी दैलेख आएको थिएँ । जुत्ता पनि यदु दाइको लगाएर हिंडेको थिएँ । सबै जनामध्यमा अस्मिताले अघिल्लो दिन जुत्ता लगाएकोमा हिंड्नुपरेको दिन चप्पल लगाउँदा अप्ठेरो भएजस्तो लाग्यो मलाई । तयारी पुगेको ढंग नपुगेको जस्तो लाग्यो ।
३ बजे ताल्चाबाट हिंडेर जुम्ला गएर बास बस्यौँ । जुम्ला रातिको १० बजे पुगेका थियौँ । होटेल बल्लतल्ल एउटा फेला पर्‍यो एअरपोर्ट छेउमा । राती १० बजे भएपनी खाना बनाइदिएकोमा त्यो होटेललाई साधुबाद टक्र्याउनै पर्छ । मुगूभन्दा जुम्लाको पानी तातो लाग्यो मलाई स्नान गर्दा । जुम्लाको पशुपतिनाथ अर्थात् चन्दननाथ मन्दिरको दर्शन गरेर कर्णाली बिज्ञान प्रतिस्ठान र बजार घुम्यौँ । ९ : ३० बजे बिहानतिर जुम्लाबाट हामी फर्कियौँ । बन्दको हल्ला थियो । निजी गाडी भएकोले असर नपर्ने हुँदा हामी लाग्यौँ । कालिकोटको मन्मामा खाना खाने बिचार गरेका थियौँ ।
मन्मा नपुग्दै गाडी बिग्रियो । ब्रेकमा समस्या देखियो । जुम्लाबजार गाडी बनाएपनी फेरी समस्या देखिएको थियो । गाडी रोकेर ५ ६ वटा गाडीलाई ब्रेक आयल माग्दै थिए गुरु । तर कसैले पनि दिएन । मलाई झल्यास्स भयो रारा आउने बेलाको दिन । त्यही बाटोमा एउटा बाइक बिग्रेको थियो । गुरुले सामान छैन भनेर ढाँटेका थिए त्यो बाइकलाई । कर्मले फेरो छिट्टै हानेछ भन्ने लाग्यो । जे होस् बिस्तारै मन्मा पुगेर गाडी बनाइयो । तर इन्धन सकिन लागेछ । कालिकोटमा हाल्ने भनेर आएकोमा कतै पाइएन । हामी कालिकोट जिल्ला अस्पातल पस्यौँ डिजेल माग्न । त्यहाँ डा टंकसँग भेट भयो। नाम पहिले सुनेपनि पहिलोपटक भेट भयो । सेतो कोटमा अग्लो कदका हल्का भुँडी लागेकोले सरकारी डाक्टरको तक्मा दिँदा फरक नपर्ने टंकले बल्लतल्ल २0 लि को जुगाड गराइदिए । चिया खान नपाएर जिब्रो रिसाइसकेको थियो । अस्पतालको क्यान्तिनमा चिया पनि खाइयो । र हामी उसको सहयोगलाई आभार मान्दै दैलेखतिर लाग्यौँ । ४ घण्टा लग्भग ढिला भइसकेको थियो । त्यसैले रातिको १२ :३० मा दैलेख जिल्ला अस्पातल पुग्यौँ । यसरी हाम्रो राराको यात्रा सकियो । एउटा मनले चिताएको तर समय नमिलेर घुम्न नसकेको रारा घुम्ने मौका मिल्यो । डा बिकासलाई यसको मुख्य योजानाकारको रुपमा बिशेष धन्यवाद ।
भूल भएमा माफ